“मेरो नानीलाई त नेपाली आउँदैन, उसँग इंगलिस् बोल्नु है” - The Sikkim Chronicle
तपाईं-हामीले कहीं न कहीं नेपालीभाषी अभिभावकको मुखबाट यो वाक्य सुनेका छौं। धेरैलाई यसो भन्न गर्व लागेको पनि हामी पाउँछौं। जुन नानीले जन्म लिएपछि बोलेको पहिलो शब्दनै ‘आमा’ हो, त्यही नानी हुर्कंदै जाँदा बिस्तारै उसले आफ्नो मातृभाषालाई भुल्दै जान्छ। शुद्ध नेपालीमा लेखिएको एउटा वाक्य समेत उसले पूरा बुझ्दैन। केही समय अघिको कुरा हो, एउटा समारोहमा एक […] The post “मेरो नानीलाई त नेपाली आउँदैन, उसँग इंगलिस् बोल्नु है” appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Aug 20, 2020 - 13:18
तपाईं-हामीले कहीं न कहीं नेपालीभाषी अभिभावकको मुखबाट यो वाक्य सुनेका छौं। धेरैलाई यसो भन्न गर्व लागेको पनि हामी पाउँछौं। जुन नानीले जन्म लिएपछि बोलेको पहिलो शब्दनै ‘आमा’ हो, त्यही नानी हुर्कंदै जाँदा बिस्तारै उसले आफ्नो मातृभाषालाई भुल्दै जान्छ। शुद्ध नेपालीमा लेखिएको एउटा वाक्य समेत उसले पूरा बुझ्दैन।
केही समय अघिको कुरा हो, एउटा समारोहमा एक विदेशीले फरर अंग्रेजी बोलिरहेका एक नेपालीभाषीसँग केही अंग्रेजी शब्दहरुको नेपाली अनुवाद सोधे। तिनले 10मा 8वटा शब्दको नेपाली अनुवाद गर्न सकेनन्। जवाफमा ती विदेशी अत्यन्त छक्क पर्दै “आफ्नो मातृभाषा कसरी नजानेको” भनेर आश्चर्यचकित बने। “तपाईंको घरमा अंग्रेजी बोलिन्छ हो?” भनेर सोधिएको प्रश्नमा सो व्यक्तिले “होईन, तर प्रोत्साहन बढ़ी अंग्रेजी बोल्नलाई दिइन्छ” भन्दा तिनी झन् छक्क परे।
तिनले “सरी तर यो कुरा मलाई पचाउन गाह्रो भयो” भन्दै हाँसे। सो समारोहमा लेखक स्वयं पनि उपस्थित थिएँ, आफूलाई मनमा कता कता ग्लानि महसुस भयो।
हुन त अंग्रेजी अवसरहरुको भाषा हो। आजको युगमा अंग्रेजी नजान्नेलाई विभिन्न अवसरहरु हात गर्नु हम्मे परिरहेको हुन्छ। यसै पनि आफ्नो मातृभाषाबाहेक अन्य कुनै भाषा सिक्नु गलत पटक्कै होईन। अवसरको निम्ति कुनै पनि भाषा सिक्नु भनेको आफ्नो योग्यता बढ़ाउनको निम्ति हो तर आफ्नो मातृभाषामा पोख्त हुनु भनेको आफ्नो अस्तित्वको जगेड़ा गर्नु हो।
अवसरको भाषा सिकिरहँदा आफ्नो मातृभाषा जान्दिन भनेर गर्व गर्नु हाँस्यस्पद विषय हो। हामी आफ्नो भाषामा पनि उत्तिकै निपुण हुन आवश्यक छ। भाषाको प्रयोग गरे मात्र भाषाको जगेड़ा हुन्छ। विश्वमा बोलिने धेरै भाषाहरु बोल्ने मानिसहरुको अभावले विलुप्त भएर गएका छन्। भारतमा मात्रै प्राय 197 भाषाहरु या त विलुप्त, लोपोन्मुख वा कमजोरको श्रेणीमा पुगिसकेका छन्।
20 अगस्त 1992 सम्पूर्ण नेपालीहरुको निम्ति एउटा ऐतिहासिक दिन थियो। सो दिन नेपाली भाषालाई भारतीय भाषाको रुपमा मान्यता दिँदै भारतको संविधानको आठौं अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त गरिएको थियो। भारतमा बोलिने सैंकड़ौं भाषाहरुमध्ये 22वटा मान्यताप्राप्त भाषाहरुको सूचीमा पर्नुजस्तो गर्वको कुरा नेपालीभाषीको निम्ति अरु के नै हुन सक्छ र!
मान्यप्राप्त हुनुको अर्थ नेपाली भाषाले भारतीय संविधानामा स्थान पाउनु मात्रै थिएन तर नेपाली भाषाको भारत देशमा विकास हुनुको निम्ति एउटा ठूलो मौका थियो। त्यसपश्चात नेपाली भाषा विकासको निम्ति भारत सरकारबाट कोष प्राप्त हुन थाल्यो।
विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा नेपाली विभागहरु खोलिन थाले। नेपालीभाषी बहुल क्षेत्र सिक्किम अनि दार्जिलिङ पहाड़-तराई मात्र नभएर अन्य भारतका ठाउँहरुमा पनि नेपाली पाठ्यक्रमको शुरुवात भयो। हर्षको विषय के छ भने यसै वर्ष बोडोल्यान्ड विश्वविद्यालयमा पनि नेपाली भाषामा स्नातक एवं स्नातक सम्मानको पाठ्यक्रम शुरुवात गरिएको छ। आसामका विभिन्न महाविद्यालयहरुमा दशकौं पुरानो नेपाली विभागहरु छन्।
नेपाली भाषा पाठ्यक्रम आफैमा बृहत छ। यसको अनुभव सीबीएसईमा नेपाली भाषा लिएर बाह्रौं श्रेणीको बोर्ड परिक्षा उतिर्ण गरेका विद्यार्थीहरुलाई राम्ररी भएको छ। त्यसपछि भाषा लिएर अध्ययन गर्नेहरुले अझ धेरै यसबारे बुझेका छन्। पाठ्यक्रम बृहत हुनुको अर्थ भाषा आफैमा धनी भएर हो। यस्तो धनी भाषालाई पनि हामीले नजानेकोमा कसरी गर्व मान्नु र! जननी चिनेको माध्यमनै यही हो। हाम्रो यति अनमोल सम्पतीको आभाष हामीलाई हुनै पर्छ। तब मात्र हाम्रो संस्कृति धनी भएर जानेछ।
भाषा छ र त नेपालीभाषीको अस्तित्व छ। भाषानै नरहे हामीले हाम्रो परिचय कसरी दिने? यो गम्भीर यथार्थलाई बुझेर मातृभाषा बोल्न जरुरी छ। यसलाई अझ सिकेर तिखारिन जरुरी छ। यसको अझ विकास गर्न जरुरी छ। यसको जगेड़ा गर्न जरूरी छ।
The post “मेरो नानीलाई त नेपाली आउँदैन, उसँग इंगलिस् बोल्नु है” appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Bimal Thapa Jul 5, 202001692
Bimal Thapa Jul 5, 202001550